Indlu yesiNtu yaseSweden eDalarna N2
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDeyana
Indlu yasemaphandleni yemveli kufutshane ne-eco ndawo yechibi iNorra Barken kunye ne-10 km ukuqhuba ukuya kwiivenkile ezikufutshane. Le ndlu inegumbi elinye lokulala elinebhedi elala abantu abathathu, igumbi elinye elinebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlala elinesofa yebhedi, igumbi lokuhlambela elinegumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye neveranda ebanzi. Ichibi kunye nebala eliluhlaza elimangalisayo linika amathuba emisebenzi eyonwabisayo. Kufuphi kukho iindawo zokuchithela i-ski-i-Rome Alpin, iimyuziyam, igalufa, iFalugruva ekhethekileyo. Ukubanakho ukurenta izindlu ezininzi, ezineebhedi ezi-2 okanye ngaphezulu.
Indlu ezimeleyo kwipropati yethu echibini. Sineendawo ezimbini - enye inezindlu ezi-3 ezifanayo kwibala elinoxolo eliluhlaza elijonge echibini. Kulo mmandla yindlu yoKhanya kunye neVeranda yeQela. Indlu ineveranda ekhethekileyo. Yindalo emangalisayo kwindawo ye-Eco eDalarna apho ukuloba iikray kuvunyelwe kuphela ngeveki enye ngonyaka. Iivenkile zikufuphi neelali - kumgama oziikhilomitha ezili-11 okanye i-14 km kumacala omabini. Kukho ibala legalufa malunga nesiqingatha seyure kude, iindawo ezimangalisayo zabakhenkethi - iimyuziyam-izindlu zamagcisa adumileyo elizwe okanye iFalugruva - imyuziyam emalunga ne-80 km kude. I-Ski resort nayo isiqingatha seyure ukusuka kwindawo yethu.
Ihlobo laseSweden lingamava amangalisayo kunye neentsuku ezinde zokukhanya, ihlobo livusa indalo, igcwele iintyatyambo, iintaka kunye nezithethe zaseSweden entliziyweni yeDalarna.